FIIRSO: Ganacsatada Soomaalida ee Khaadka oo ku dhawaaqay iney joojiyeen khaadkii kaga imaan jiray Kenya – War La Helaa Talo La Helaa
FIIRSO: Ganacsatada Soomaalida ee Khaadka oo ku dhawaaqay iney joojiyeen khaadkii kaga imaan jiray Kenya
By Xuseen Madoobe	 Last updated Feb 19, 2019
Ganacsatada Somaliyed ee qaadka ka keeni jiray dalka Kenya ayaa gabi ahaanba ku dhawaaqay inay joojiyeen oo maanta ay ugu dambeyso qaadkii uga imaan jiray dalkaasi.
Gudoomiyaha Guddiga Ganacsatada Jaadleyda Somaliyed Qooje Maxamuud Qayliye ayaa ku dhawaaqay gabi ahaanba inay joojiyeen qaadkii uga imaan jiray dalka Kenya oo ay doorbideen Difaaca Qarankooda.
Wuxuu sheegay inay marka horeba dhib ku qabeen qaadka Kenya uga imaan jiray oo dhaqaale badan uu kaga bixi jiray, balse haddii Ganacsatada qaadka Kenya ay ku hanjabeen inay joojinayaan qaadka, kuwa Somalida maanta ay ku dhawaaqeen inayba joojiyeen.
“Laga bilaabo maanta waan joojinay qaadkii inooga imaan jiray Kenya, waxaana ka dooranay difaaca qarankeeda, badeena & dhulkeena, wixii intaasi dheer oo Siyaasad ah waxaan u dhaafnay Dowladda Somaliya, qaadkana waxaan ka keensaneynaa dalka Itoobiya oo Suuqeenii aan u wareejinay.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Guddiga Ganacsatada Qaadleyda Somaliyed.
Talaabada maanta ganacsatada Somaliyed ay ku dhawaaqeen ee ay ku joojiyeen qaadkii uga imaan jiray dalka Kenya ayaa muujinaysa mid ganacsatada Somaliyed ay ku qaateen go’aan adag oo ay ku garab istaageen dalkooda.
Xafiiskii Xisbiga Wadajir ee magaalada Garowe oo gabi ahaanba la xiray
Wariye caan ahaa oo goordhow geeriyooday